Taiwan sy Burkina Faso dia nanapaka ny fifandraisana ara-diplomatika tao anatin'ny tsindry Sina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Taiwan sy Burkina Faso dia nanapaka ny fifandraisana ara-diplomatika tao anatin'ny tsindry Sina
Taiwan dia nanapaka ny fifandraisana tamin'i Burkina Faso taorian'ny nilazan'ny firenena afrikanina fa nanapaka ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'ilay nanjakan'ny tena izy, hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Taiwanese, Joseph Wu, ny alakamisy teo.
Naneho ny alahelony i Wu tamin'ity fanapahan-kevitra ity ary nanampy izy fa tsy afaka mifaninana amin'ny harem-bolan'ny Sinoa i Taiwan.
Nilaza i Sina fa tsy manan-jo hanana fifandraisana ara-dalàna amin'ny firenena vahiny ny nosy.
Taiwan sy China dia nifaninana tamin'ny fitaomana iraisam-pirenena nandritra ny am-polony taona maro, matetika nanantona fonosana fanampiana malala-tanana eo imason'ny firenena mahantra.
Burkina Faso no firenena faharoa nandao an'i Taiwan tao anatin'ny herinandro. Ny Repoblika Dominikanina dia nanova ny fanekeny an'i Beijing tamin'ny fiandohan'ity volana ity, namela ilay nosy hanana mpiara-dia diplaomatika 18 monja manerantany.
Ny filoham-pirenena Taiwaney Tsai Ing-wen dia nilaza fa ny hetsiky ny tanibe Shina dia manaraka ny "fandrosoana farany teo amin'ny fifandraisana ara-toekarena sy fiarovana amin'i Etazonia sy ireo firenena mitovy hevitra aminy".
“Nanohina ny faran'ny fiarahamonina Taiwan i [China]. Tsy handefitra intsony izahay fa ho tapa-kevitra ny hanatratra an'izao tontolo izao, ”hoy i Tsai.
Nanampy izy fa tsy hiditra amin'ny diplaomasia dolara i Taiwan - handrotsaka vola fanampiana ireo mpiray dina ho avy - amin'ny fifaninanana amin'ny tanibe.
Tsy dia fantatra mazava raha hanangana fifandraisana diplomatika i Burkina Faso sy Beijing saingy nilaza i Wu fa mety "ho ela na ho haingana" ary "fantatry ny rehetra fa i Shina [tanibe] no antony tokana".
Tany Beijing, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia nilaza tamin'ny fanambarana fa nankatoaviny ny fanapaha-kevitr'i Burkina Faso.
"Tongasoa eto amintsika ny fidiran'ny Burkina Faso amin'ny fiaraha-miasa am-pirahalahiana any Shina sy Afrika haingana araka ny fotokevitra tokana-Shina," hoy ny mpitondra teniny Lu Kang.
Jumeirah ao amin'ny Saadiyat Island Resort hanokatra varavarana amin'ny 11 Novambra